Sampana Willow ho fitaovana ho an'ireo sary sokitra | Famoronana an-tserasera
Tsy mitsahatra ny gaga izahay amin'ny sasany amin'ireo zavatra noforonin'ireo mpanakanto sary sokitra ireo. Amin'ity indray mitoraka ity eizy dia mpanakanto izay mandray rantsana willow be dia be hamadika azy ireo ho sary sokitra izay mifanaraka tsara amin'ny ala rehetra.
Ity iray ity Mpanao sary sokitra anglisy antsoina hoe Anna & the Willow, dia mampiseho amintsika ny zavatra aingam-panahiny hamoronana sary sokitra entanin'ny natiora mihitsy. Natiora manome fitaovana mitovy amin'ny hazon'ny hazomalahelo.
Nanomboka niasa tamin'ity fitaovana ity i Anna 10 taona lasa rehefa naka taranja sary sokitra izy. Tamin'ny alàlan'ny fitaovana voajanahary dia nanokatra ny sainy ho amin'ny tontolo vaovao izy, ka nanomboka nianatra ireo teknika fanenomana harona samihafa izy; Eto i wicker dia miasa betsaka any amin'ny faritra maro any Espana koa.
Tena nahafinaritra azy ny nianatra an'ireo fahaiza-manao nentim-paharazana fa afaka nampiditra ny fihodinanan'ny tenany manokana tamin'ny fizotry ny fianarana izy. Ireo tompon'ity asa tanana ity dia mahay mamorona sobika sy fanomezana kely isan-karazany, saingy mahay mamorona sary sokitra lehibe ity mpanakanto ity amin'ny alàlan'ity teknika nentin-drazana ity.
Mitranga ny fizotran'ny asanao amin'ny sary maro alohan'ny hanombohana ny famerenana ny sary sokitra amin'ny taolam-by vy. Rehefa manomboka mifamatotra tsorakazo hazomalahelo be dia be i Anna mba hamoronana sary sokitra tsara sy tena lehibe izay hitanao amin'ireo sary zarainay.
Ny sasany amin'izy ireo dia mandalo ny 2 metatra sy sasany ny hahavony hijoro toy ireo maherifo na aiza na aiza misy azy ireo. Ny iray amin'izy ireo dia vehivavy manana zana-tsipìka sy zana-tsipika azo jerena tsara any anaty ala mba hitambatra amin'ny fomba lehibe.
Afaka mahita ianao Asan'i Anna ao amin'ny Instagram y araho tsara ny fizotran'ny aingam-panahinao ary fifehezana ity fitaovana mora ampiasaina sy manokana ity. Mandao anao izahay miaraka amin'ny karazana sary sokitra hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo sary sokitra vita amin'ny hazon'ny hazomalahelo